Qarixii Muqdisho oo siyaasad lugaha la galay & Baadhitaankii Hay’addaha Amniga oo Hakad ku jira. – Xeernews24
Qarixii Muqdisho oo siyaasad lugaha la galay & Baadhitaankii Hay’addaha Amniga oo Hakad ku jira.
26. Oktober 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Qaraxii weynaa ee 14-kii bishan Oktoobar ka dhacay Isgoyska Soope ee magaalada Muqdisho ayaa u muuqda mid la siyaasadeeyay iyadoo dowladda Federaalka Soomaaliya aanay wax war ah kasoo saarin baadhitaankii socday muddo ku dhow laba toddobaad.
Ilo wareedyo kala duwan oo ka tirsan hayadaha ammaanka dalka ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa loola dan lahaa xarumo dhowr ah oo lagu soo daray saldhigga Turkiga dhowaan ka furay magaalada Muqdisho.
Arrintan ayaa lagu sheegay mid jihada looga weecinayo baadhitaankii ku socday qaraxa, iyadoo marka la eego socodka gaadhiga weyn ee qarxay aanay jahadiisu ahayn saldhigga Turkiga, kuna socday gudaha magaalada Muqdisho, isagoo kasoo gudbay suuragalnimada inuu ku socday saldhigga Turkiga.
Saraakiisha ammaanka ayaa qaarkood saxaafadda reer Galbeedka u sheegay in gaadhigu ku socday Xarunta xalane iyo Garoonka diyaaradaha, halka qaar kale ay qabaan inuu ku socday Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya oo aad ugu dhoweyd goobta uu ku qarxay.
Intii ay soo baxday saadaasha ah inuu Gaadhiga qaraxa siday ku socday Saldhigga Turkiga ee Muqdisho waxaa dib u dhac weyn ku yimid baadhitaankii kiiskan iyo warkii la filayay inay kasoo saaraan hay’adaha ammaanka, iyadoo xaaladu hadda isu bedeshay in arrinta laga dhigo mid siyaasadeed oo u dhaxeysa Imaaraadka iyo Turkiga.
Wasiirka Amniga ayaa dhowaan sheegay inay soo bandhigi doonaan baadhitaanka qaraxii Muqdisho, taasoo aan weli suuragelin, waxaana hore balanqaadkan oo kale u sameeyay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/xog-culus.jpg 116 250 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-26 11:35:452017-10-26 11:35:45Qarixii Muqdisho oo siyaasad lugaha la galay & Baadhitaankii Hay’addaha Amniga oo Hakad ku jira.
Wararkii ugu dambeeyay Doorashada ku Celiska ah ee Kenya iyo Rabshado la cu... Dawladda Itoobiya oo ku biirtay dalalka Madaxweyne Farmaajo ku cadaadinaya in...